नेपाल आइडलकी मेचुले ल्याइन् अत्यन्तै मर्मस्पर्शी गीत ‘मैले के बिगारे’ (भिडियो) —
नेपाल आइडलकी मेचुले ल्याइन् अत्यन्तै मर्मस्पर्शी गीत ‘मैले के बिगारे’ (भिडियो)
१४ माघ २०७७, बुधबार ११:२६ admin	0 Comments
काठमाडौंँ । गायिका मेचु धिमालको नयाँ गीत ‘मैले के बिगारे’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा करणराज कार्कीको संगीत तथा लेखु सहयात्रीको शब्द सुन्न रहेको छ । मार्मिक शब्द समावेश गीतको भिडियोमा पति वियोगको कथा प्रस्तुत गरिएको छ । भिडियोमा गायिका मेचु आफैँले अभिनय गरेकी छन् । उनको पतिको रुपमा ज्वाला राईले साथ दिएका छन् ।
मेचुकै कन्सेप्ट तथा निर्देशन रहेको भिडियोमा पेटेर पुरुङको छायाँकन, विष्णुहरी तिमल्सेनाको सम्पादन रहेको छ । भिडियो हेर्नुहोस्
यो पनी पढ्नुहोस्ः बलिउड स्टार ज्याकलिन सँग हलिउड फिल्ममा काम गर्दै ट्रान्सजेन्डर मोडल अन्जली लामा
काठमाण्डौ । नेपाल चर्चित मोडल हुन् ट्रान्सजेन्डर अन्जली लामा । अन्जलीले अब नेपालमा मात्र नभएर हलिउडमा समेत आफ्नो स्थान बनाउने मौका पाउने भएकी छिन् । प्राप्त जानकारी अनुसार अन्जली हलिउड चलचित्रमा अभिनय गर्ने तयारीमा छिन् । उनले सेयरङ ए राइड नामक चलचित्रमा काम गर्न लागेको बताइएको छ ।
अन्जलीले यो चलचित्रमा बलिउडकी सर्वाधिक चर्चित नायिका ज्याकलिन फर्नान्डेजसँग काम गर्दैछिन् । यो चलचित्रलाई लिना यादवले निर्देशन गर्ने बताइएको छ । डेडलाइनका अनुसार, यो एक एन्थोलजी चलचित्र हो । जसको नाम ‘वुमेन्स स्टोरिज’ राखिएको छ । यो चलचित्रलाई विभिन्न ४ भागमा विभाजित गरेर निर्माण गरिनेछ ।
जसमा कारा डेलेविन्ज, इवा लोन्गारिया, मार्गरिटा बाय, मारिका गे हार्डेन र लीवनर वारेलाको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ । लर्वोलिनो इन्टरटेन्मेन्टको सह–निर्माण तथा वि डू इज टूगेदरको निर्माणमा बन्न लागेको यो चलचित्रले महिलाको फरक–फरक जीवनको कथालाई प्रस्तुत गर्नेछ । चलचित्रको छायांकन भारत र अमेरिकामा हुने बताइएको छ ।
← बलिउड स्टार ज्याकलिन सँग हलिउड फिल्ममा काम गर्दै ट्रान्सजेन्डर मोडल अन्जली लामा
अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनयापनका लागि कति खर्च लाग्छ ? थाहा पाइराखौ ! →
स्मिताको अङ्गालोबाट छुट्नै मानिनन् छोरी,आमाको माया यतिसम्म… (भिडियो)
२४ माघ २०७७, शनिबार ०८:३० admin	0
इन्द्रेणीबाट चर्चामा आएकी गायिका टिका सानु र इन्द्रेणीका संचालक कृष्ण कँडेल बिचको लफडा के हो ? दुवै जना आए आइभमा ( हेर्नुहोस भिडियो )
२५ मंसिर २०७७, बिहीबार ०२:५८ admin	0